इन्टरनेटको शुल्क बढाएर समृद्धि सपना पुरा हाेला ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more इन्टरनेटको शुल्क बढाएर समृद्धि सपना पुरा हाेला ?
असार ३१ गते, २०७६ - २२:५९
काठमाडौं । स्थानीय तहकाे निर्वाचनमा सबै जनप्रतिनिधि उम्मेद्वारका मुखमा झुण्डिएकाे शब्द हाे ‘स्मार्ट’ । स्मार्ट गाउँ, शहर, पार्किङ, ट्वाइलेटसम्म स्मार्ट बनाउने सपना देख्नेहरूले सिंगाे वडा देखि गाउँसम्मका निकायहरूमा ‘फ्री वाइफाइ’ काे सपना देखाए । उनीहरूकाे याे सपना साबिककाे इन्टरनेटकाे मूल्यमा बढ्ने शुल्कले विराेधाभास पैदा गराएकाे छ ।
हाे, साउन १ गतेदेखि इन्टरनेटको शुल्क बढ्ने भएपछि सरकारकै गाउँ गाउँमा इन्टरनेट भन्ने नारा केबल नारामा मात्र सिमित हुने देखिन्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६७७ देखि दुरसंचार सेवामा १३ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाउने भएपछि सेवा प्रदायकहरुले शुल्क बढाएका हुन् ।
आगामी वर्षदेखि इन्टरनेट तथा दुरसंचार सेवामा सेवा शुल्क लगाउने भन्दै आर्थिक विद्येयकमा उल्लेख छ । सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच गतवर्ष ग्राहकले तिर्नुपर्ने इन्टरनेट शुल्क नबढाउने सहमति भएपनि सरकारले लगाएको थप सेवा शुल्कले आफूहरुलाई आर्थिक भार थपिएको सेवा प्रदायकको भनाई छ ।
असार ३१ गते, २०७६ - २२:५९ मा प्रकाशित